Kedu ihe bụ PrestaShop? ya isi atụmatụ na ọrụ | ECommerce ozi ọma
Susana Maria Urbano Mateos | | StartUps na ndi oru itumgbere ahia
PrestaShop maka ụlọ ahịa dị iche iche, bụ ewu ewu Ecommerce n'elu ikpo okwu. E-azụmahịa kwa afọ na-atụle pasent dị elu nke ego na-ere ahịa gburugburu ụwa.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị ọganihu a, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ga-eche ihe ịma aka dịgasị iche iche na-aga n'ihu ihu ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịlanarị asọmpi siri ike dị. Ọ dị iche na ndị ọzọ ma bulie ntụgharị ọ bụ ebumnuche na ịma aka maka saịtị e-commerce niile.
Ebe ikpo okwu nke Ecommerce a na-ahọrọ mgbe niile ga-eme mgbanwe, PrestaShop pụtara ìhè taa dị ka otu n'ime arụnyere kasị ewu ewu.
Uzo ndi ozo bu WooCommerce, Magento, na OpenCart.
Maka obere na nnukwu ụlọ ọrụ, ma ọ bụ naanị onye ọ bụla chọrọ ijikwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, PrestaShop dị ka ikpo okwu Ọ ga-ekwe ka ya na ahụkebe uru na nsonaazụ.
1.0.1 Ọ na-arụ ọrụ dịka:
2 Katalọgụ - Nchịkwa PrestaShop
3 Ngalaba na PrestaShop
4 Ngwaahịa - Gosiputa na PrestaShop
5 Ọnụahịa bara uru na PrestaShop
6 Saịtị - Nchịkwa PrestaShop
7 Nchọgharị Nchọgharị - Njikarịcha maka PrestaShop
8 Ibe ndenye ọpụpụ
9 Mbupu na PrestaShop
10.1 Ha kwụpụtara dị ka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ:
11 Ahịa na PrestaShop
12 Nbanye ndị ahịa
14 Nchedo PrestaShop
15 Ụtụ isi
16 Akụkọ na nyocha
17 Stlọ ahịa ọtụtụ ụlọ ahịa Prestashop
Ọ bụ njikwa ọdịnaya dị ike na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na onye bu enwere ike iwu ụlọ ahịa site na ncha.
Mgbe emechara ya, ọ ga - adị mfe ịme ya modulu na isiokwu n'okpuru ikikere azụmaahịa na n'ọtụtụ ọnọdụ n'efu.
Kemgbe afọ 2007, infinities nke azụmaahịa na netwọkụ na-eji ikpo okwu a yana ree ngwaahịa dijitalụ ma ọ bụ nke anụ ahụ Site na ya, ụdị uto dị otú ahụ enwetaworị nke ahụ karịa Storeslọ ahịa 300.000 na-arụ ọrụ na CMS a.
Ikpo okwu a ga-enye ndị ahịa ohere ịhụ n ’nhọrọ dịgasị iche iche ngwaahịa ha chọrọ ma ọ bụ ndị ahọpụtara ịzụrụ.
Ọ na-arụ ọrụ dịka:
Nkwupụta akụkọ na nyocha
Nchịkwa ọtụtụ ụlọ ahịa,
Na ngụkọta enwere karịa 310 arụmọrụ arụmọrụ
O kwere omume na ikpo okwu iji mee ka ndi mmadu dozie ya na nhazi ya.
Katalọgụ - Nchịkwa PrestaShop
Ọ ga-ekwe omume inwe a ndepụta ike ngwaahịa n'agbanyeghị ole n'ime ndị a dị. A ngwakọta dị mgbagwoju anya ma melite ya ngwa ngwa. O nwere ikike setịpụrụ njirimara, gbasaa ego, mbubata na mbupụ ngwa ngwa ma kewaa ngwaahịa.
Ọ nwere ike ịnyagharịa n'ígwé, nweta ọkwa ọhụụ, nwere àgwà na-akparaghị ókè (agba, nha, wdg), jikwaa na-agbada n'umu onu ahia na onu ogugu na onu ogugu, nwee akwụkwọ nnata na akwụkwọ ọnụahịa na usoro PDF, ire ere na njikwa ngwaahịa.
Ngalaba na PrestaShop
Ndị edemede ahụ dị ezigbo mkpa iji nweta iche ngwaahịa ndị ahụ dị maka ịzụ ahịa na Ecommerce, ya mere o doro anya na ha dị mkpa na ụlọ ahịa ahụ. Site na ụlọ ọrụ azụ nke weebụ njikwa a ga-ekwe omume.
Ọ ga-enwe ike ike osisi nke "edemede - subcategories", na-eme ụdị edemede tupu oge eruo, nke ga-adị mkpa iji mepụta ụdị ndị ọzọ n'ime nke a.
Ngwaahịa - Gosiputa na PrestaShop
Ọ ga egosiputa ụdị ngwaahịa dị iche iche n'ụzọ dị ịrịba ama, yana ohere ngosipụta dị iche iche. Otutu ụdị nke ihe oyiyi site na ngwaahịa, akpaka resizing na bia-na.
Ngosipụta ọnụahịa na VAT ma ọ bụ na-enweghị ya, ngosipụta nke ọdịnaya nke Nkata, mbipụta nke kaadị na ngosipụta nke ngwaahịa na otu ụdị.
Ọ ga - enyere aka ịhọrọ ọtụtụ ngwaahịa iji gosipụta kwa ibe, tinye ha na ndepụta onyinye yana arụmọrụ ndị ọzọ na nke a.
Ọnụahịa bara uru na PrestaShop
Enwere ike ekenye ha emelitere ahịa na ụtụ isi ka ọ bụla ngwaahịa. Site na ikike ịhọpụta mba, edemede, otu ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ahọrọ.
Enwere ike itinye ha n'ọrụ ma ọ bụ kenye ha ego site na mkpokọta ma ọ bụ pasent nke ọnụahịa nke ngwaahịa.
Saịtị - Nchịkwa PrestaShop
Ijikwa saịtị na ikpo okwu a dị mfe. Debe ụlọ ahịa na ụdị nke kachasị ọhụrụ mmelite dị n'ime iru nke "pịa".
Enwere ike izipu ozi ịntanetị site na a Mkpọtụrụ Mpempe
Chetara ha ngwaahịa na isi na peeji nke, nwere a kọntaktị ụdị dị iche iche posts, nwalee a ọhụrụ na peeji nke tupu igba egbe.
Lelee akaụntụ onye ahịa.
Nwere modulu ibubata ụlọ ahịa.
Igbe iji gosipụta nkwalite na nhọrọ iji tinye ọkọlọtọ mgbasa ozi.
Nchọgharị Nchọgharị - Njikarịcha maka PrestaShop
Ọ ga-ekwe omume ịkwalite peeji ahụ ka engines ọchụchọ kachasị mkpa na netwọkụ nwere ike ịgụnye ụlọ ahịa ahụ, na-enye ohere ịbawanye ohere ịntanetị okporo ụzọ.
Na ụlọ ọrụ dị ịrịba ama maka idezi mkpado ngwaahịa, nkpado aha, nkọwa meta na mkpado meta.
Ohere inweta inweta a Maapụ saịtị na-eme onwe ya, igwe ojii okwu na arụmọrụ ndị ọzọ.
Ibe ndenye ọpụpụ
Tụkwasị na a Peeji zuru ezu zuru ezu, enwere ike nweta onu ogugu di elu.
Uzo a gha enyere aka imecha zuta otu peeji, nke gha eweputa mfe ahụmahụ maka ọrụ.
Ubi nwere ike ịbụ omenaala iji nakọta ozi achọrọ. N'otu aka ahụ, ikpo okwu na-enye ohere iji mepụta onyinye pụrụ iche, onyinye onyinye ma ọ ga-ekwe omume itinye ọnọdụ nke ire ere na njedebe nke ịzụta.
Mbupu na PrestaShop
Site na ọnụnọ nke modulu mbupu, a na-ejikọ ikpo okwu na ndị na-ebu ezigbo mkpa, na-enye ndị ahịa nhọrọ Elitụkwasị obi a pụrụ ịdabere na ngwugwu nsuso ngwugwu.
Ga-enwe ike hazie ibu, ebubo na mbupu mgbochi. N'ozuzu, a ga-enwe njedebe na-akparaghị ókè na ndị na-ebu ya, yana ndị nke ikpeazụ site na mpaghara.
A ozi nke mbupu site na email na nyocha nke ọnụahịa nke otu, ụgwọ maka njikwa wdg.
Ikpo okwu nwere mwekota na dị iche iche ịkwụ ụgwọ nhọrọ, enwere ohere nke ịwụnye ha dị mfe. Ọ ga-ekwe omume idozi na anatala ịkwụ ụgwọ ahụ, ebe a ga-enwe usoro nzaghachi na onye ahịa site na ịnye ozi.
Ha kwụpụtara dị ka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ:
Authorize.net na ndị ọzọ dị mkpa.
Ọ ga-ekwe omume ịmepụta iwu ọnụahịa na ụtụ isi nke mba, steeti, ógbè wdg.
Nkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ enweghị oke njedebe na nnyefe ego na ndenye ego.
Ahịa na PrestaShop
na ire ahia na nkwado na Prestashop nwere ikike enwere ike.
Enwere ike ibugharị ndị ọbịa, ọ na-enye gị ohere ibupụ ngwaahịa na igwe nchọgharị ọchụchọ.
Na-ezipụ ozi ịntanetị
Na-ebupụ ngwaahịa na eBay
Akwụkwọ ndenye aha
Google Adwords mwekota
Kupọns akwụkwọ ozi
Ngosipụta ngwaahịa gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya
Mmemme mgbakwunye na ngwaọrụ nkwado ndị ọzọ
O zuru oke site na Prestashop iji nye ndị ahịa a nnọọ enyi na enyi na mfe nbanye, nwere akaụntụ onwe onye na ohere nke izi ozi dabere na mkpa ndị achọrọ.
Mkparịta ụka ndụ, izipu ozi site na akaụntụ na akụrụngwa ndị ọzọ.
Enwere ihe karịrị Enwere nsụgharị 40. Obodo PrestaShop na ọkwa ụwa zuru oke karịa mba 150.
Enwere ike ịtụgharị otu ụlọ ahịa n'ọtụtụ asụsụ, nke na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ yana ahịa niile enwere ike ị nweta.
Ikpo okwu na-enye ohere mbupụ na mbubata ngwungwu ntụgharị asụsụ, jiri ngwa ntụgharị asụsụ n'ịntanetị na mkpebi ọnọdụ mpaghara.
Prestashop ejiri a njikọ dị nchebe, nke dị oke mkpa maka ijikwa ịzụrụ ihe n'ịntanetị, na nnabata si PCI ka SSL.
Ọ akọwaputa nche ikike maka ọrụ, nwere okwuntughe ngafe na igbochi ha mgbe ugboro ugboro mgbake mgbalị. Ọ na-ezipụkwa kuki na okwuntughe. Nwere ike soro wayo ma nwee ọfịs nwere ezigbo nchekwa.
Na-enye usoro nlekota oru na ohere ịchọpụta ọnọdụ onye ahịa, na-agbakọ ụtụ isi a kapịrị ọnụ. Nhazi ọnụego mgbanwe na ohere maka onye ahịa ịhọrọ ego masịrị ya ga-ekwe nkwa.
N'echiche a, ikpo okwu na-enye ohere ịmekọrịta mmekọrịta nke ọnụego mgbanwe, ịhazi usoro ego, ọnụego na-akparaghị ókè, wdg.
Akụkọ na nyocha
Imezu nyochaa ahịa ma nwee data gbasara mmekọrịta nke ndị ọbịa nke ụlọ ahịa ahụ, ha niile nwere ebumnuche iduzi ọganiru na nghọta ihe ndị ọrụ chọrọ ma chọọ; a ga-achọta akụkọ zuru oke na nke a.
Na-enye ohere a ọrụ nsuso nke ndị ọbịa bịara na ụlọ ahịa ahụ mere wee gosipụta profaịlụ nke ndị ahịa ahọpụtara.
Ọ ga-eme ka ngosi nke akụkọ banyere ikpo okwu dị na ụlọ ọrụ azụ, ọ nwekwara ya mwekota na Google Analytics.
Nwere ike ịzụlite na Prestashop njikwa nke ibe anaghị achọta ma nweta akụkọ isiokwu. Site na ikpo okwu ị ga-enwe ike ịchọpụta nke bụ ngwaahịa kachasị mma, ntụgharị ntụgharị site na otu, wdg.
Stlọ ahịa ọtụtụ ụlọ ahịa Prestashop
Ọ ga-ekwe ka echekwa ụlọ ahịa dị iche iche n'ịntanetị n'agbanyeghị nha ha ma ọ bụ oke ha, ha niile na-amalite site na otu Nchịkwa ma ọ bụ interface Office dị na arụmọrụ dị egwu.
Ọ ga-akwado nhazi nke katalọgụ ma ọ bụ site na ụlọ ahịa ma ọ bụ otu n'ime ndị a, yana ndebiri maka nke ọ bụla ọkachasị yana iche iche ma ọ bụ kerịta ebuka na otu, na-ekewapụ ma ọ bụ na-ekekọrịta iwu na ụgbọ ala ịzụ ahịa.
Enwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ kewaa akaụntụ ndị ahịa n'ime otu ụlọ ahịa. Ikpo okwu ga-ahapụ oyiri ụlọ ahịa omenala na-ebubata nhazi nke ọzọ.
Enwere ike ịnweta URL ma ọ bụ adreesị Weebụ maka ụlọ ahịa ọ bụla, n'ụzọ dị otú a, enwere ike iburu n'uche akụkụ dịka asụsụ, ngalaba mgbọrọgwụ, ego, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Kedu ihe bụ PrestaShop?
Ihe onyonyo onye na -edobe Carlos Aguirre dijo
Ezigbo ozi, ụlọ ọrụ nyeere m aka na ụlọ ahịa m n'ịntanetị bụ otu na Spain a na-akpọ Mitsoftware, ọrụ ha dị ukwuu, naanị m ga-eweta ndị ahịa na ahịa m, nke bụ ụdị ụlọ ọrụ m, mana ọrụ ha dị mma
Zaghachi Carlos Aguirre
Zụọ ahịa ma ọ bụ PrestaShop, nke ikpo okwu dị mma maka ecommerce gị